एनआरएनएको नेतृत्व लिने होड सकारात्मक र रचनात्मक बनोस् :: The First Nepali Magazine Published in Australia
एनआरएनएको नेतृत्व लिने होड सकारात्मक र रचनात्मक बनोस्
आउने पुस्तालाई ‘हामी नेपाली हाम्रो नेपाल’ भनेर चिनाउन सबैले एनआरएनएको यो चौतरी उपयोग गराैं ।
-- सम्पादकीय जुलार्इ अंक २०१७ / प्रकाशित मिति : बिहिबार, असार २२, २०७४
जन्मभूमि छोड्दै गर्दा हामी मध्ये धेरैले दुईचार जोर कपडा सुटकेसमा हालेर अनि मन भरि देश बोकेर उन्नत भविष्यको कल्पना सहित जहाज चढेका थियाैं । असीको दशकमा सर्बसाधारणले विदेश जाने भन्नासाथ पल्टनमा भर्ना हुने भन्ने थियो त्यो बेला नेपालीहरूको परिचय वीर गोर्खालीको रुपमा थियो । त्यस पछाडि हामीले जोरेको परिचय हो मेहनती, इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ । यिनै परिचयले आज सम्पूर्ण गैह्र अवासीय नेपालीहरूले गर्ब गर्न सक्ने उपेद्र महत्तो, शेष घले, भवन भट्ट, जीबा लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू हामीले पाएका छाैं । भने कति गुमनाम यस्ता पात्र होलान् जो नेपाली सबैका लागि आदर्श बनेर शिक्षा, ब्यापार, खोज, प्रबिधि लगायतका क्षेत्रमा स्थापित छन्, स्थापित हुने प्रयासरत छन् ।
आफ्नो र आफ्ना परिवारका आधारभूत आबश्यकताहरू पूर्ति गरि उमेरको नेटोसमेत चढ्दै गर्दा मानवीय स्वभाब नै हो हामी समाजमा चलायमान हुन खोज्छौं । सामजिक रुपमा पनि आफ्नो परिचय बनाउन खोज्छाैं, त्यसको पछाडि स्वार्थभन्दा सामाजिक दायित्व, आफु भित्र लुकेको परोपकारी भावना र नागरिक हुनुको दायित्व हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
सन्दर्भ एनआरएनए अष्ट्रेलियाको नेतृत्व छनोटको चुनाबी माहोल, यसैमा रमेका सोसियल मिडिया र हामी भएर जोडिन खोज्दै गर्दा आउने सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हो । किनकि आहिले हामीले लड्ने चुनाब या एनआरनएनएको नेतृत्व भनेको घर भित्रको कुरा हो आफ्नो र परिवारको समय समुदायलाई दिन अगाडि आउँदै गरेका सबै हाम्रा हुन् सबै राम्रा हुन् । त्यसैले घर भित्रको हाम्रो यो क्षणिक जस्तो देखिने प्रतिस्पर्धामा कोहि निरुत्साहित बन्नु नपरोस् ।
बिदेशी भूमिमा सहकार्यको मूलमन्त्रलाई हामी संधै आत्मसाथ गरौं, सकारात्मक सोचको विकास गरौं । हामीबीचको भावनात्मक एकता कहिल्यै छिन्न भिन्न नबनोस् ।
यो सुरुवाती हो, हामी साँच्चै नै परिपक्क बनेर सामाजिक परिचय रोज्न खोजेका हौ भने हाम्रो यात्रा निक्कै टाढा छ, र यो यात्रा त्यति बेला मात्र फलदायी बन्न सक्छ जब हामीमा पहिला अरुलाई सम्मान गर्ने, अरुको कुरा सुन्ने बानि बसाल्छाैं । यहाँको नेपाली समाज हाम्रो घर हो, आफ्नो र पारिबारिक समय समाज सेवामा र संस्थागत हितमा लगाउँछु भनेर आउने सबै साथीहरू धन्यबादका पात्र छन् । विदेश बासाईका सुरुवाती दिनहरू संघर्षका कथा र व्यथाहरू बाट एकै छिन् सुस्केरा हालेर सामजिक पद धारण गर्न इच्छुकहरू सबैका हाम्रा हुन् सबैका राम्रा हुन्, भलै कुनै एउटा पदको लागि एक भन्दा बढी आकांक्षी भए पश्चात छनोट प्रक्रियामा जानु स्वाभाविक हो । यसलाई मात्र यसरि नै बुझौ कि हामी दुवै या हामी यति जना मात्र यति पदको लागि इच्छुक बन्यौं ल न त हेरु हामी मध्ये कतिलाई भित्र बसेर र कतिलाई बाहिर बसेर काम गर्न साथीहरूले भन्दा रहेछन् । यो स्वस्थ सोचाई भै दिने हो भने भोलिका दिनहरूमा कसैसँग पनि हातेमालो गर्न कठिनाइ हुने छैन । होइन भने अबको दुई बर्ष त्यही कुण्ठा पालेर बस्यो अनि फेरि अर्को महाधिबेशन आउँछ, अर्को चुनाब आउँछ अनि फेरि कसलाई पछार्ने भन्ने मात्र सोच्ने हो भने काम कहिले गर्ने हो ? संस्थामा आबद्द हुँदै देशको लागि केहि दिन भनेर आएकाहरू बीच कसरि सामन्जस्यता हुन सक्ला ?
त्यसैले हामीबीचको सदभाब सामाजिक भावना कहिल्यै नभत्कियोस नबिग्रियोस । देश छोडेको हामी पहिलो पुस्ताको चुनौती भनेको त हाम्रो कला, संस्कृति, रहन सहन र पहिचान दोश्रो पुस्तामा जोगाउनु पो हो त । आउने पुस्तालाई ‘हामी नेपाली हाम्रो नेपाल’ भनेर चिनाउन सबैले एनआरएनएको यो चौतरी उपयोग गरौ । आजै बाट सुरु गरौं, बिदेशी भूमिमा सहकार्यको मूलमन्त्रलाई हामी संधै आत्मसाथ गरौं, सकारात्मक सोचको विकास गरौं । हामीबीचको भावनात्मक एकता कहिल्यै छिन्न भिन्न नबनोस् । एनआरएनए अष्ट्रेलियाले चुस्त नेतृत्व पावोस्, एनआरएनए अष्ट्रेलियाको आउँदै गरेको अधिबेशन सफल रहोस् । एनआरएनएको नेतृत्व लिने होड सकारात्मक र रचनात्मक बनोस् ।